Shan askari oo Turki ah oo ku geeriyooday qarax gaari oo ka dhacay gudaha gobolka Al-Bab ee Suuriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldShan askari oo Turki ah oo ku geeriyooday qarax gaari oo ka dhacay gudaha gobolka Al-Bab ee Suuriya
January 20, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Shan askari oo Turki ah oo ku geeriyooday qarax gaari oo ka dhacay gudaha gobolka Al-Bab ee Suuriya. [Sawirka: Anadolu]
Ankara-(Puntland Mirror) Shan askari oo katirsan ciidamada Turkiga ayaa ku dhimatay sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax gaari oo ay geysteen ururka ISIS, sida ay sheegeen saraakiisha milatariga Turkiga.
Taliyaha guud ee ciidamada Turkiga ayaa sheegay weerarka uu ka dhacay tuulada Suflaniyah ee gobolka Al-Bab ee gudaha Suuriya.
Turkiga ayaa markii kowaad taangiyadiisu waxa ay ka gudbeen xadka Suuriya bishii Agoosto ee sanadkii lasoo dhaafy, si ay ula dagaalamaan dagaalyahanada ururka ISIS iyo xoogaga Kurdiyiinta ee ku sugan gudaha Suuriya, kuwaasoo sheegtay masuuliyada weeraradii ugu dambeeyay ee argagixiso oo dhiig badan ku daatay oo ka dhacay gudaha magaalooyinka Turkiga.
Shirka madasha qaran ee u dhaxeeya hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya oo lasoo gabagabeeyay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirka madasha qaran ee u dhaxeeyay hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya ayaa galabta oo Talaado ah lagu soo gabagabeeyay caasimada Soomaaliya, Muqdisho. Hoggaamiyaasha dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa isku raacay xilliga ay dhawaan [...]